Ihe ị ga-eme ka ị kwụsị iche echiche banyere onye bụbu onye òtù ọlụlụ | Bezzia
Maria José Roldan | 21/06/2022 22:59 | Mmekọrịta
Ọ dịghị mfe ma ọ bụ dị mfe ịkwụsị mmekọrịta. Ịtụgharị ibe ahụ bụ oge siri ike nye ọtụtụ ndị mmadụ, karịsịa mgbe ị kwụsịghị iche echiche banyere onye gị na ya na-akpabu ụbọchị dum. Maka nke a, ọ dị mkpa ịgafe ọkwa dị iche iche nke iru újú ma nwee ike iwughachi ndụ n'ụzọ kasị mma.
N'isiokwu na-esonụ, anyị ga-enye gị usoro ntuziaka nke nwere ike inyere gị aka ichefu onye gị na ya na-akpabu.
1 Kwanyere usoro nke iru újú ùgwù
2 Mmetụta dị irè ma dị mkpa
3 Chọta ihe na-eju gị echiche efu
4 Ị ga-atụgharị ibe ma chefuo banyere onye bụbu onye mmekọ
5 gaa na ọkachamara
Kwanyere usoro nke iru újú ùgwù
Ọtụtụ mgbe, a na-eme nnukwu ndudue nke itinye echiche nke ịkwụsị iche echiche banyere onye mbụ. Ọ bụ ihe nkịtị na ọ na-esiri ike ịkwụsị iche echiche na imezu ya bụ ihe ga-ewe gị oge. Ị ga-amakwa ka e si asọpụrụ rhythms nke iru újú ma nwee ndidi ruo mgbe oge na-abịa mgbe a na-echeghị banyere onye mbụ.
Mmetụta dị irè ma dị mkpa
Ikewapụ onye gị na ya ga-akpasu ụdị mmetụta dị iche iche. site na mwute ruo na agụụ ma ọ bụ ikpe ọmụma. Ọ bụ ihe nkịtị ka ụdị mmetụta ndị a na-eme na ya mere ọ dị mkpa iji kwado ha. Ikwe ka mmetụta dị otú ahụ bụ isi ihe mgbe a bịara n'ịtụgharị ibe na ịkwụsị nkwụsị.
Chọta ihe na-eju gị echiche efu
Ọ dị mkpa ịchọ ihe nwere ike iweghachi echiche efu efu. Ihe ọ bụla na-aga iji kwụsị iche echiche banyere onye bụbu onye òtù ọlụlụ na-ebi ndụ na nchekwube na positivity kwa ụbọchị. Ịdọpụ onwe gị na ụfọdụ ihe omume ntụrụndụ ma ọ bụ mmasị ga-eme ka ị nọrọ n'ọnọdụ ahụ ma nwee obi ụtọ ná ndụ.
Ị ga-atụgharị ibe ma chefuo banyere onye bụbu onye mmekọ
Ị ga-ama ka esi atụgharị ibe ma mara na okirikiri ahụ abịala na njedebe. Iji mee nke a, enwere ike ịme emume ihe atụ ma bechapụ njikọ nke ya na onye mbụ ya na ya na-emekọbu. Ememe ahụ bụ isi mgbe a bịara ịkwụsị iche echiche banyere onye ahụ na inwe ike ịnụ ụtọ ndụ ọhụrụ.
gaa na ọkachamara
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike ịrịọ onye ọkachamara maka enyemaka. Ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ike ibelata mmekọrịta ha na onye ha na ha na-emebu n'onwe ha, ha ga-achọkwa enyemaka nke onye ọkachamara. Enyemaka ọ bụla dị ntakịrị ma a bịa n'ịnabata nkewa ahụ na izere ụdị echiche ọ bụla gbasara onye mbụ.
Na nkenke, ọ dịghị mfe ịkwụsị iche echiche banyere onye mbụ. Onye ọ bụla dị iche iche, yabụ ịmara otu esi akwado mmetụta dị iche iche na ikwe ka oge gwọọ ọnya niile bụ isi. Ọ dị mkpa ka ị ghara ikpe onwe gị ikpe n'ụzọ na-adịghị mma maka iche echiche banyere onye òtù ọlụlụ mbụ gị na ime ihe niile kwere omume ka mgbu ahụ ghara ịdịru ogologo oge. Mgbe ụfọdụ, idebe onwe gị akara ma ọ bụ isetịpụ ihe mgbaru ọsọ ụfọdụ pụrụ inyere gị aka imeri iru uju. Cheta ịgakwuru onye ọkachamara ma ọ bụrụ na ịnweghị ike iwepụ echiche dị otú ahụ n'isi gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Ihe ị ga-eme iji kwụsị iche echiche banyere onye mbụ